गोरखाको एउटा गाउँ नै चीनले आफ्नो बनायो – सरकार किन बोल्दैन ?
Homeबिबिधगोरखाको एउटा गाउँ नै चीनले आफ्नो बनायो – सरकार किन बोल्दैन ?
काठमाडौं । रुई गाउँ नेपालको थियो, खोइ कसरी हो चीनप्रशासित तिब्बतको अधीनमा पुग्यो। पराईको शासन खप्न नसक्ने स्थानीय त्यहाँबाट भागेर साम्दोमा आई बसे। उनीहरूले ६० वर्षसम्म आफ्नो थातथलो बिर्सिएका छैनन्।
त्यसो त रुईवासी पनि समय–समयमा यता आउँछन्, साम्दोवासी पनि रुईतिर गइरहन्छन्। यो खबर अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा गोरखाबाट शिव उप्रेतीले लेखेका छन्।
‘पहिले त हामी एउटै हो नि’, चुमनुब्री गाउँपालिका–१ का जनप्रतिनिधिसमेत रहेका लामा भन्छन्, ‘तर, पछि चाइनाको भयो। नेपाल सरकारले आफ्नै गाउँ किन तिब्बतलाई दियो? किन दाबी गरेन ? हामीले केही बुझ्न सकेनौं।’
ल्होको बुनाक्छा गुम्बालाई छोरा गुम्बा भन्छन् र बिहीको मामानिखाङ गुम्बालाई आमा गुम्बा भन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङदेखिका लामा गुरुहरू त्यहाँ अध्ययन गर्न आउँछन्। सबैभन्दा ठूलो अध्ययन केन्द्रजस्तै हो त्यो गुम्बा तर नेपालले गुमायो।’ रुई भोटभित्र चारवटा टोल छन्। सबैमा गरेर १ सय ७० घरधुरी रहेको उनी सुनाउँछन्।
सरकारले वास्ता नगरेपछि चुपचाप सहनुपरेको स्थानीयको गुनासो छ। ‘यति ठूलो गाउँ छ, यति ठूलो गुम्बा छ। यताभन्दा राम्रो खेती हुने जमिन छ तर सरकारले वास्तै गर्दैन। हामीले के गर्न सक्छौं र?’, उनी भन्छन्, ‘पहिलेदेखि मुद्दा बनाइरहेको भए अहिले ब्युँताएर पाउन सकिन्थ्यो। अब ६० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। यति बेला मुद्दा उठाएर के गर्ने रु चाइना सरकारसँग दुस्मनी गर्नु मात्रै हुन्छ।’
tadalafil5mg – tadalafil buy online tadalafil 20mg
does propecia work on temples – http://finasteridepls.com/ does finasteride work
finasteride shedding – http://propechl.com/ avodart vs propecia
generic tadalafil 20mg – over the counter tadalafil usa buy real tadalafil online
Ucxdkj – http://virviaga.com/ buy viagra louisiana
Wupdde – apa annotated bibliography template word Dyakoo sbdvdz
Fwyfri – levitra cialis Txmuqv qqjcxm
Mjzxpr – furosempi.com Escfwo byhxot